Home » အင်တာဗျူး
မေး - ကျွန်တော် ဖောင်ကြီးက ပါ။ နေ့စဉ် ရန်ကုန်မြို့ကို အသွား ^အပြန်စီးဖို့အတွက် Toyota Belta 2010 တစ်စီးဝယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါ တယ်။ Belta 1000 CC ကားနဲ့ Belta 1300 CC 4WD ကားနှစ်စီးမှာ ဘယ်ကားက သင့်တော်ပါသလဲ။ ဂရု စိုက်ရမယ့်အချက်တွေကို သိချင်ပါ တယ်။ ဦးဦးအော်တို လမ်းညွှန်ပေးပါ။
ဖြေ - Toyota Belta 1000 CC နဲ့ 1300 CC နှစ်မျိုးမှာ အင်ဂျင် ထုထည်စီစီ ကွာခြားတဲ့အတွက် မြင်း ကောင်ရေအားလည်း ကွာပါတယ်။ Belta 1300 CC အင်ဂျင်က ပိုပြီး အားကောင်းတာပေါ့။ နွေရာသီလို အရမ်းပူတဲ့အချိန်မှာ အဲကွန်းသုံးရ မယ်ဆိုရင် 1300 CC အင်ဂျင်က နိုင်နိုင်နင်းနင်းရှိပါတယ်။ ခရီးဝေး မောင်းတာ၊ တောင်ပေါ်လမ်းမောင်း တဲ့အခါမှာလည်း အင်ဂျင်ပါဝါစွမ်း အားများတာ မမှားပါဘူး။ Belta 1300 CC 4WD ကားကိုပဲရွေးပါ။ ဆီစားနှုန်းက (36 mpg) ရှိပါတယ်။
ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဂရုစိုက် ရမယ့် အချက်တွေကတော့ အတော် များပါတယ်။ တာယာ၊ ဘရိတ်စနစ်၊ အင်ဂျင်ဝိုင်ပုံမှန်လဲပေးတာ၊ ဘက် ထရီထိန်းသိမ်းတာ၊ အော်တိုဂီယာ ဘောက်မှာ ATF ဆီစစ်ဆေးတာ၊ ကားရေတိုင်ကီအအေးခံစနစ် ဂရုစိုက် ထိန်းသိမ်းတာ၊ ကားအောက်ပိုင်းပြု ပြင်တာ၊ အလိုင်းမင့်ချိန်တာ၊ တာယာ တွေလှည့်ပြီး သုံးရတာ၊ Air Cleaner သန့်ရှင်းဖုန်ခါတာ စတဲ့အချက် အလက်ပေါင်းအတော်များများကို သိရှိလေ့လာထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒီ အကြောင်းတွေရေးပြနေရင် ဂျာနယ် တစ်စောင်တောင် မပြီးပါဘူး။ Auto World ဂျာနယ်မှာ ကားပြုပြင်ထိန်း သိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အပတ်စဉ် ရေးသားထားပါတယ်။ ကျွန်တော် ရေးတဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုပြန်ဖတ်ပါ။ မရှင်းတာ၊ နားမလည်တာရှိရင် မေးပါ။
ကားပိုင်ရှင်တစ်ဦးဟာ ကား မောင်းတတ်ရုံနဲ့မပြီးပါဘူး။ ကားနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အခြေခံဗဟုသုတတွေ သိဖို့လိုပါတယ်။ ကားတစ်စီးကို ဘယ်လို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတဲ့ အသိတရားနဲ့ အလေ့အကျင့်ကောင်း တွေလိုပါတယ်။ ကားဝပ်ရှော့ပ်တွေ၊ ဆားဗစ်စင်တာတွေ သိကျွမ်းရင်းနှီး နေဖို့လိုပါတယ်။ ဘာဖြစ်ရင်ဘယ်မှာ သွားလုပ်ရမလဲ သိဖို့လိုပါတယ်။ ခေတ်ပေါ်ကားတွေရဲ့ ပြောင်းလဲတိုး တက်လာတဲ့ နည်းပညာတွေကို တီးမိ ခေါက်မိရှိဖို့လိုပါတယ်။ ကားနည်း ပညာနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့စာအုပ်တွေဖတ် ပါ။ အင်တာနက်မှာလေ့လာပါ။
မေး - ဆလွန်းကားဖြစ်ဖြစ်၊ စတေရှင် ၀ပ်ဂွန်ပဲဖြစ်ဖြစ် သိန်း (၁၁၀) ကနေ သိန်း (၁၅၀) ၀န်းကျင် လောက်ရှိတဲ့ ခရီးဝေးစီးလို့ကောင်းတဲ့ လူစီးကား အမျိုးအစားတွေကို ရွေး ချယ်ပေးပါ။
ဖြေ - သိန်း (၁၅၀) ၀န်းကျင် လောက်ရှိတဲ့ အိမ်စီးကားအတွက် Toyota အုပ်စုထဲမှာ Fielder နဲ့ Honda အုပ်စုထဲက Airwave ကား တွေကောင်းပါတယ်။ ဗင်ကားဖြစ်တဲ့ အတွက် ခရီးဝေးသွားရင် ပစ္စည်း လည်းတင်လို့ကောင်းပါတယ်။ Nissan အုပ်စုထဲမှာ သိပ်ကောင်းတဲ့ ကားမ တွေ့ပါဘူး။ တကယ့် ကားကောင်းစီး ချင်ရင်တော့ သိန်း (၂၀၀) အထက်မှာ ပဲရှိပါတယ်။ ဒေါ်လာငွေ လဲနှုန်းတွေ မြင့်လာတဲ့အတွက် နံပါတ်မကျသေး တဲ့ ကားကောင်းတွေ ဈေးတက်နေပါ တယ်။ မနှစ်က ထွက်ထားတဲ့ F,G အက္ခရာတန်းကားဆိုရင် ဈေးနည်း နည်းသက်သာပါလိမ့်မယ်။ C အက္ခရာ အုပ်စုထဲမှာ ဟိုတုန်းက Toyota Mark II တို့၊ Crown တို့ ကားကောင်းတွေ ရှိပါတယ်။ သိန်း (၁၀၀) လောက်နဲ့ရ နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဈေးကွက်ထဲမှာ စုံစမ်းကြည့်ပါ။ ရန်ကုန်ဆင်းလာမှ အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်။
မေး - ကားအင်ဂျင် အခေါ် အဝေါ်တွေထဲမှာ DOHC ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာပါလဲ။ VVT-i အင်ဂျင် ဆိုတာလဲ ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်လဲ ဦးဦး အော်တိုရှင်းပြပေးပါ။
ဖြေ - DOHC ဆိုတဲ့ အတို ကောက်စာလုံးက Double Over Head Camshaft လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါ တယ်။ DOHC အင်ဂျင်ဆိုတာ ကင်မ် ရှပ် နှစ်ချောင်းပါတဲ့ Over Head Camshaft Engine ကို ဆိုလိုတာပါ။ ခေတ်ပေါ် ကားအင်ဂျင်တွေက ဗား (Value) အရေအတွက်များများပါတဲ့ အတွက် Camshaft နှစ်ချောင်းသုံး ထားပါတယ်။ 16 Valvs အင်ဂျင် ဆိုရင် ပစ္စတင်တစ်လုံးကို ဗား (၄) ချောင်းနဲ့ ပစ္စတင် (၄) လုံးအတွက် ဗား (၁၆) ချောင်းရှိပါတယ်။
Overhead Valve Engine နဲ့ Over Head Camshaft Engine ဆို ပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ Overhead Valve Engine မှာ Camshaft က အင်ဂျင်ဘလောက်ထဲမှာ ရှိပါတယ်။ ဗားတွေကို Push Rod(ပလွေရိုးတံ) နဲ့ တွန်းပါတယ်။ OHC လို့ခေါ်တဲ့ Over Head Camshaft အင်ဂျင်မှာ တော့ Camshaft က Engine Head မှာပဲရှိပါတယ်။ Camshaft ကို Timing Belt ကြိုး (ဒါမှမဟုတ်) ချိန်း ကြိုးနဲ့ ဆွဲလှည့်ပေးပါတယ်။ ခေတ် ပေါ်ကားအင်ဂျင်တွေက ဗားအရေ အတွက် များများပါတဲ့အတွက်ီDOHC အင်ဂျင်အမျိုးအစားဖြစ်ပါ တယ်။ Camshaft နှစ်ချောင်းရှိပါ တယ်။ Valve တွေက ပစ္စတင်တစ်လုံး မှာ လေးချောင်းနှုန်းပါ။ ပစ္စတင် ခြောက်လုံးထိုး အင်ဂျင်ဆိုရင် 24 Valve ရှိပါတယ်။
VVTi ဆိုတာက Toyota Engine တွေမှာသုံးတဲ့အတိုကောက် စာလုံးပါ။ Variable Valve Timing အင်ဂျင်လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ဒီ ကနေ့ခေတ်ပေါ် ကားအင်ဂျင်တွေမှာ Variable Valve Timing နည်းပညာ ကို သုံးလာကြပါတယ်။ အင်ဂျင် လည်ပတ်နှုန်း r.p.m မြင့်မားတဲ့ အချိန် မှာ အင်ဂျင်ထဲကိုလေနဲ့ လောင်စာ ဆီအရော များများဝင်လာနိုင်အောင် Intake Valve ကိုကြိုတင်ပြီး ပွင့်နိုင် အောင် ဒီဇိုင်းပြောင်းလာကြတယ်။ ဒီလိုမျိုးဗားတိုင်မင် ပြောင်းလဲပေးနိုင် တဲ့အင်ဂျင်မှာ အင်ဂျင်စွမ်းဆောင်ချက် တိုးတက်လာတယ်။ ဗားတိုင်မင်ကို အင်ဂျင်ဝိုင်ပန့်ဖိအားနဲ့ ဆက်နွှယ်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်အောင် ဒီဇိုင်းလုပ်ထား ပါတယ်။ အင်ဂျင်လည်ပတ်နှုန်း မြင့် လေ အင်ဂျင်ဝိုင် ဖိအားများလာလေ ဖြစ်လေ့ရှိပြီး Valve ပွင့်ချိန်ကို စောစေခြင်းဖြစ်တယ်။ ထိုလိုမျိုး ဗား တိုင်မင်ပြောင်းလဲမှ အင်ဂျင်ထဲကို လေများများဝင်နိုင်ပြီး အိတ်ဇော အငွေ့တွေလည်း များများထွက်လာ နိုင်တယ်။
ဗားတိုင်မင် ပြောင်းလဲခြင်း၊ သဘောတရားနဲ့ VVT-i အင်ဂျင် အကြောင်း အသေးစိတ်ရေးပြဖို့ စာမျက်နှာနေရာ အခက်အခဲရှိပါ တယ်။ VVT-i နည်းပညာအကြောင်းကို (၂၀၁၂) ခုနှစ်က ကျွန်တော်ဆောင်း ပါး ရေးဖူးပါတယ်။ ပြန်ရှာပြီးဖတ် ကြည့်ပါ။ နောင်အလျဉ်းသင့်ရင် ဗား တိုင်မင်ပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်းတွေ ကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပါ့မယ်။
Autolife Car & Car Services မှ မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ ကိုသက်ပိုင်စိုးနှင့် အမေးအဖြေ
ကျေးဇူးရှင် Car Sales Centre မှ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ကိုသက်ပိုင်ဌေးနှင့် အမေးအဖြေ
Golden Chance Service Co.,Ltd. မှဒါရိုက်တာ ဦးသိန်းသန်းနှင့်အမေးအဖြေ
၀န်းရံခကားအရောင်းမှ မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ ကိုမင်းမင်းမောင်နှင့် အမေးအဖြေ
BNF Express မှ ဒါရိုက်တာကိုဖြိုးဇော်နှင့် အမေးအဖြေ
၀န်းရခံ Car Sale Center Services Company Limited ၏ မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးမင်းမင်းမောင်နှင့် အမေးအဖြေ
Prime Gate Co.,Ltd. Exporter For Trading Japanese Used Cars မှ ပြည်တွင်းတာဝန်ခံ ကိုစည်သူလင်းနှင့် အမေးအဖြေ
အမှတ်(32) ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့စုမှ တပ်ကြပ်ကြီးခင်မောင်မြင့်နှင့် အမေးအဖြေ